မောင်​စိုးလင်း​အောင်​ ကို ….ဓါးနဲ့ ၂၁ ချက်​…ထိုးသတ်ခဲ့သူကို အမိန့်ချလိုက်ပြီ – ရှအေလငျး
ပြည်​ ခရိုင်​ တရားရုံးခရိုင်​တရားရုံး၁မှ လူသတ်​မူ့ အမိန့်​ချမှတ်​ ။ပြည်​ခရိုင်​ ​ပေါင်းတည်​မှတ်​တိုင်​တံတားထိပ်​အနီး ​ကျောင်းမှပြန်​လာ​သော ​အသက်​ ၁၅ နှစ်​​ကျောင်းသား​လေး​ဆိုင်​ကယ်​နှင့်​ပြန်​လာသူ​မောင်​စိုးလင်း​အောင်​အား၂၀၁၄ခုနှစ်​ ည​နေအချိန်​တွင်​ သတ်​​သောအမူ့ဖြစ်​ပါသည်​။
တရား ခံ ဖိုး​လုံး​ခေါ် စိုးလွင်​​ပေါင်းတလည်​ လက်​ပံ​တော​နေသူ သည်​​မောင်​စိုးလင်း​အောင်​အားမှတ်​တိုင်​ တံတားထိပ်ကျောင်းဆင်းအပြန်​ ထိုးသွင်းဒါဏ်​ရာ ၂၁ချက်​ဖြစ်​သတ်​ခဲ့ပြီး​ရှောင်​တိမ်း​နေရာ၂၀၁၆တွင်​​ဖော်​ထုတ်​ဖမ်းဆည်းမိ​သောအမူ့ဖြစ်​ပါသည်
ဆ်ိုင်​ ကယ်​လာ​ရောင်းရာမှစပီးကွင်းဆက်​​ပေါ်လာပီးသက်​​သေများ ခိုင်​လုံပါသဖြစ်​ပြည်​ခရိုင်​တရားရုံး ၁ ခရိုင်​တရားသူကြီးမှ
တရားခံဖိုးလုံး ​ခေါ် စိုးလွင်​အားလူသတ်​မူ့ ၃၀၂. ၁[ဂ] အရ ကြိုးမိန့်​မ​သေမခြင်းကြိုး ကွင်းစွပ်​သတ်​ရန်​ယ​နေ့ ည​နေ ၃ နာရီတွင်​ပြည်​ခရိုင်​တရားရုံး​တော်​ကြီး မှ အမိန့်​ ချမှတ်​လိုက်​သည်​။
​နေပြည်​​တော်​တိုင်း [မ်​]တိုင်းတာဝန်​ခံပြည်​ခရိုင်​ ပြည်​မြို့
ပွညျ​ ခရိုငျ​ တရားရုံးခရိုငျ​တရားရုံး၁မှ လူသတျ​မူ့ အမိနျ့​ခမြှတျ​ ။ပွညျ​ခရိုငျ​ ​ပေါငျးတညျ​မှတျ​တိုငျ​တံတားထိပျ​အနီး ​ကြောငျးမှပွနျ​လာ​သော ​အသကျ​ ၁၅ နှဈ​​ကြောငျးသား​လေး​ဆိုငျ​ကယျ​နှငျ့​ပွနျ​လာသူ​မောငျ​စိုးလငျး​အောငျ​အား၂၀၁၄ခုနှဈ​ ည​နအေခြိနျ​တှငျ​ သတျ​​သောအမူ့ဖွဈ​ပါသညျ​။
တရား ခံ ဖိုး​လုံး​ချေါ စိုးလှငျ​​ပေါငျးတလညျ​ လကျ​ပံ​တော​နသေူ သညျ​​မောငျ​စိုးလငျး​အောငျ​အားမှတျ​တိုငျ​ တံတားထိပျကြောငျးဆငျးအပွနျ​ ထိုးသှငျးဒါဏျ​ရာ ၂၁ခကျြ​ဖွဈ​သတျ​ခဲ့ပွီး​ရှောငျ​တိမျး​နရော၂၀၁၆တှငျ​​ဖျော​ထုတျ​ဖမျးဆညျးမိ​သောအမူ့ဖွဈ​ပါသညျ
ဆျိုငျ​ ကယျ​လာ​ရောငျးရာမှစပီးကှငျးဆကျ​​ပျေါလာပီးသကျ​​သမြေား ခိုငျ​လုံပါသဖွဈ​ပွညျ​ခရိုငျ​တရားရုံး ၁ ခရိုငျ​တရားသူကွီးမှ
တရားခံဖိုးလုံး ​ချေါ စိုးလှငျ​အားလူသတျ​မူ့ ၃၀၂. ၁[ဂ] အရ ကွိုးမိနျ့​မ​သမေခွငျးကွိုး ကှငျးစှပျ​သတျ​ရနျ​ယ​နေ့ ည​နေ ၃ နာရီတှငျ​ပွညျ​ခရိုငျ​တရားရုံး​တျော​ကွီး မှ အမိနျ့​ ခမြှတျ​လိုကျ​သညျ​။
​နပွေညျ​​တျော​တိုငျး [မျ​]တိုငျးတာဝနျ​ခံပွညျ​ခရိုငျ​ ပွညျ​မွို့
“သားဖြစ်သူ “မင်းသွေး” …အတွက်ချထားတဲ့ ရေစက်ခွက်လေးကြည့်ပြီး…. ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေတဲ့ အရီးဒေါ်သန်းမြိုင်”
“အမြန်လမ်းမှာ ကားတွေကိုလေသေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့အဖွဲ့ကို အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းမိပြီ “